Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA: hanimba ny fanarenana ara-toekarena, asa maratra ny fiakarana fiampangana amin'ny seranam-piaramanidina Espaniola
AENA dia manolo-kevitra ny hampiakatra ny sarany ampiasain'ny mpampiasa amin'ny seranam-piaramanidina 46 izay soloiny manerana an'i Espana
Nihena 76% ny fangatahan'ny mpandeha tamin'ny taona 2020 ary tsy antenaina ho sitrana tanteraka hatramin'ny 2024
Ny isan'ireo toerana misy rohy mivantana mankany Espana dia nidina hatramin'ny 1,800 (2019) ka hatramin'ny 234 (2020)
Asa espaniola mihoatra ny 1.1 tapitrisa no very na tandindomin-doza ary very ny EUR 60 miliara ny harin-karena faobe
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nampitandrina fa ny tolo-kevitr'i AENA hampiakatra ny fiampangana ho an'ny mpampiasa amin'ny seranam-piaramanidina 46 ampiasainy manerana an'i Espana dia mety hanimba ny fanarenana ara-toekarena sy ny asa any Espana avy amin'ny COVID-19.
Ireo tolo-kevitra natolotra ny DGAC ho fankatoavana dia misy ny fangatahana fampiakarana 5.5% ny fiampangana mandritra ny dimy taona. Hosokafan'izy ireo koa ny varavarana hahafahan'ny AENA mamerina ny vola nalainy noho ny krizy COVID-19, ho an'ireo serivisy izay tsy voasaina mihitsy, na iza amin'ireo kaompaniam-pitaterana tsy afaka miditra.
“Ao anaty krizy ny indostrian'ny seranam-piaramanidina iray manontolo. Mila mampihena ny vidiny ny tsirairay ary manatsara ny fahaizany manamboatra ny simba ara-bola amin'ny COVID-19. Rehefa avy nandinika ny toe-javatra nisy an'i AENA, dia mino ireo zotram-piaramanidina fa afaka mampihena ny fiampangany azy ny 4%. Ka ny fanolorana hevitra hampita ny enta-mavesatry ny fanarenana ara-bola amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fiakarana 5.5% dia tsy andraikitra tsy tompon'andraikitra. Tokony handà avy hatrany ny fangatahana ny DGAC ary hanome toromarika ny AENA hiara-hiasa amin'ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka amin'ny drafitra fanarenana ifanarahan'ny roa tonta, ”hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
Mialoha ny areti-mandoza, AENA dia nanambara dividends 2.59 miliara nandritra ny vanim-potoana 2017-19, ary manana safidy maromaro izy hanaronana ny fatiantoka aterany. “Ny AENA dia afaka mamatsy vola mora foana ny fatiantoka vetivety nefa tsy mampiakatra ny vidiny amin'ny mpanjifany. Izy io dia manana naoty tsara indrindra hahazoana fidiram-bola. Nahazo valisoa lehibe ireo tompon-tany ary tsy maintsy mizara ny sasany amin'ny fanaintainana. Ary, toy ny sisa amin'ny indostria, tsy maintsy mijery ny fahombiazan'ny asa izy mba hampihenana ny vidiny, izay tsy refy refy indrindra amin'ny Eropa, "hoy i Walsh.
Sehatra fitaterana an'habakabaka mahasalama - miaraka amin'ny ankolafy rehetra mifantoka amin'ny fampihenana ny vidiny - no ho zava-dehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiatraikany ratsy nataon'ny COVID-19 teo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fitaterana:
Ny anjara birikin'ny dia sy fizahan-tany ho an'ny toekaren'i Espana dia nidina hatramin'ny 12% ka hatramin'ny 4%.
“Ny fanarenana aloha ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny toe-karena any Espana. Saingy hampihemotra ny fitomboan'ny fizahantany ny vidim-piainana avo kokoa ary hampidi-doza ny asa. AENA dia tokony hitadidy ny tombontsoa maharitra ho an'ny tompon-tany sy ny firenena. Ary samy aroso tsara miaraka amin'ny fotodrafitrasa seranam-piaramanidina lafo vidy. Ny governemanta Espaniola dia mikaroka fatratra ny hanokatra sisintany sy hanombohana indray ny fivezivezena an'habakabaka. I AENA dia mila mandray anjara amin'izany ezaka izany fa tsy manangana sakana tsy mijery lavitra sy liana amin'ny tena, "hoy i Walsh.